Helitaanka daryeelka caafimaadka | Zanzu
Gudaha Netherlands waxaa jira adeegyo badan iyo xirfad yaqaano ku caawin kara adiga haddii aad u baahato macluumaad ku saabsan caafimaadka, haddii aad qabto dhibaato caafimaad ama haddii aad ku jirto xaalad degdeg ah.
Markaad u baahato inaad caawimo u tagto waxay ku xidhantahay meesha aad ku nooshahay iyo sharcigaaga magan galyada. Gudaha Netherlands, waxaad la tashan kartaa dhakhtarkaaga guud marka koowaad marka aad bugto. Marka lagu daro dhakhtarka guud, waxaa jira dhakhaatiir gudaha Netherlands, tusaale ah gudaha cusbitaalada. Waxay garanayaan wax badan oo ku saabsan hal qayb jidhka ah, tusaale ahaan wadnaha ama sambabadada, ama wax ku saabsan cudur gaar ah. Marka lagu daro dhakhaatiirta guud iyo dhakhtarada jooga cusbitaalka, waxaad sidoo kale u tegi kartaa dhakhtarka ilkaha, dhakhtarka indhaha, dhakhtarka dawaynta jidhka, ummulisada, daryeelka guriga, ururka daryeelka dhalin yarada, ama adeega caafimaadka dad waynaha degmadda (GGD) Wixii adeegyada aan caafimadka ahayn, sida taageerada dhabta ah ama bulshadda dhexdeeda, waxaad utegi kartaa ururada wixii shaqada bulshadda ah.
Haweenay u tegaysa dhakhtar
Hooyada xarunta magan galya doonka ah (azc)
Xarunta magan galya doonka waxay sisaa daryeelka caafimaad dhammaan magan galya doonka ku nool halkan, iyaddoon loo eegin sharcigooda magan galya doonka. Xaga xarunta magan galya doonka, waay la tashan karaan dhakhtarka guud, ummulisada ama daryeelka dhalin yarada oo waxaa loo gudbin karaa cusbitaal. Magan galya doonka waxay haystaan xaqa daryeelka caafimaadka la midka ah dadka Dhajka, waxaa lagu caymiyaa bilaash oo waxba ma bixinayaan. Dadka da'da yar ilaa dadka 18, daawaynta dhakhtarka ilkaha waa laga bixiyaa sidoo kale. Wixii dadka waa wayn ah waxaa la siiyaa ilaa ugu badbaan qadar 250 Yuuro ah sanadkiiba.
Dhammaan magan galya doonka qaba dhibaatooyinka caafimaad ama su'aal waxay iman karaan saacadaha la tashiga xaga xurunta. La tashiga koowaad inta badan waxa uu wataa kaaliyaha dhakhtarka. Kaaliyaha dhakhtarka waxa uu go'aamiyaa haddii aad uu baahantahay inaad aragto kalkaaliso ama dhakhtar guud. Caawimada dhakhtarka ayaa ballan adiga kuu samayn doonta. Waxaa sidoo kale laguu gudbin karaa cusbitaal.
Maxaa la samaynayaa haddii aanan haysan oggolaanshaha degenaanshaha?
Qof kasta oo degen Netherlands wax ka badan saddex bilood iyagoon haysan oggolaanshaha degenaanshaha aan ansaxa ahayn waxaa looga fekeraa qof aan "sharci lahayn". Dadka aan "sharciga lahayn" iskuma caymin karaan nafahooda kharashyada dafryeelka caafimaadka, laakiin waxay leeyihiin xaqa daryeelka caafimaadka lama huraanka ah.
Hoy gudaha degmadda ah (dadka la siiyay magan galyada)
Marka magan galya doonka la siiyay oggolaanshaha degenaanshaha, isaga/ iyadda waxaa loogu yeedhaa statushouder afka Dhajka. Ururka dhexe ee soo dhowanta magan galya doonka (COA) waxa uu kuu magacaabaa degmo. Ka dib marka aad u guurto degmadda waa inaad iska diiwaangelisaa caymiska caafimaadka. Gudaha degmooyinka, tan wada jir ahaan ayaa loo abaabulaa. Intaa ka dib, waxaad iska diiwaangelin kartaa dhakhtarka guud. Waxaad bixisaa wax ku biiriska caymiskaaga iyo waxa dheeraadka ah ee caymiskaaga caafimaadka (eigen risico), oo wakhtiyada qaarkood sidoo kale waa waxku biirinta gaarka ah dhanka kharashyada caafimaadka ama daawaynta (eigen bijdrage).
Bal ka waran daryeelka caafimaad ahaan lama huraanka ah?
Xaqa daryeelka caafimaad waa xaqa aasaasiga ah ee qof kasta, xataa dadka aan haysan oggolaanshaha degenaanshaha. Xaqa daryeelka caafimaadka lama huraanka ah waxaa lagu dejiyay gudaha sharciga.
Dhakhtarka waxa uu go'aamiyaa haddii daryeelka caafimaadka uu lama huraan yahay ama aanu ahayn. Daryeelka caafimaadka lama huraanka ah waxa uu ka badan yahay daryeelka aad ka heli lahayd waaxda gurmadka caafimaadka. Waxay noqon kartaa labbadaba dawayn iyo daryeel ka hortag ah gudaha cusbitaalka ama dhakhtarka. Mabda' ahaan, waxay ka koobantahay daryeelka lama huraanka ah oo habboon. Tan waxaa ka mid ah la tashiga ka hortagga uurka ama ilma soo ridka.
Dhakyarka iyo xirfad yaqaanada caafimaadka kale waxaa saaran waajib sharci ah inay tixgeliyaangaar ahaanshahaaga oo ku ilaaliya macluumaadka ay kaa hayaan qarsoodi.
Haddii aanad bixin karin kharashyada daryeelka caafimaad, dhakhtarka ama daryeel bixiyaha waxa uu ku dhawaaqi karaa kharashyada xaga xafiiska maamulka dhexe (CAK). Cusbitaalada qaarkood iyo farmasiiyada waxay qandaraas la leeyihiin CAF. Waydii dhakhtarkaaga guud ka uu yahay cusbitaalka gaarka ah ama ka uu yahay farmasiiga aad tegi karto.
Maxaan sameeyaa si aan u helo daryeelka caafimaad ahaan lama huraanka ah?
Haddii aad ku nooshahay Netherlands addoon haysan degenaansho joogta ah iyo addoon haysan caymis, waxaad leedahay xaqa aad ku hesho daryeelka caafimaad ahaan lama huraanka ah. Wixii ah daryeelka dhibaatooyinka aan nolosha halis gelinayn, waxaad la xidhiidhi kartaa dhakhtarka guud ama, fiidka ama dhammaadka todobaadka, saacadaha dhakhtarka guud shaqada ka maqan yahay (huisartsenpost) aaga aad ku nooshahay. Dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin karaa dhakhtar takhasus leh wixii baadhitaano dheeraada ah. Waxaad ku heli doontaa warqadda gudbinta tan. Xaalada shilalka xaaldaha nolosha halis gelinaya, waxaad tegi kartaa waaxda shilka iyo gurmadka xaga cusbitaalka. Cusbitaal kasta sida waaxda, uma baahnid warqadda gudbinta. Haddii aad u baahantahay baabuurka ambalaaska, waxaad wici kartaa lambarka 112 bilaash ahaan.
Waa maxay xuquuqahayga haddii aan haysto oggolaanshaha degenaanshaha?
Haddii aad haysato oggolaanshaha degenaanshaha, laakiin weli ku nooshahay mid ka mid ah xarumaha magan galya doonka, waxaad isticmaali kartaa adeegyada daryeelka caafimaadka xaga xarunta.
Markaad ka guurto xarunta daryeelka caafimaadka magan galya doonka ilaa degmada, oo aad diiwaangelisay adeegbixiya caymiska caafimaadka, waxaad heshaa kaadhka caymiska caafimaadka. Laga bilaabo hadda, waxaad isticmaali kartaa daryeelka caafimaadka degmadaada, oo waxaad iska diiwaangelisaa dhakhtarka guud.
Bal ka waran xirfad yaqaanka daryeelka caafimaadka haddii aanu ku hadlin luqaddayda?
Muddada joogidaada xaga xarunta magan galya doonka, turjubaanada waxaa loo heli karaa xirfad yaqaanada daryeelka caafimaadka.
Maxaad samayn lahayd haddii lagu siiyay magan galyo, aad ku nooshahay degmadda oo aad u baahantahay turjubaan wixii booqashada dhakhtarka ama cusbitaalka? Xaaladaas, kharashyada turjubaanka waxaa bixiya adeeg bixiyaha caafimaadka. Tan, adeeg bixiyaha caafimaadka (dhakhtarka guud, cusbitaalka ama adeeg bixiyaha caafimaadka) caadi ahaan waxay la leeyihiin qaban qaabo gaar ah turjubaanka ama adeega turjumaada. Sidii statushouder waxaad xaq u leedahay turjubaanka telefoonka marka aad aragto dhakhtarkaaga guud ee daawaynta ama la tashiga. Waxaad leedahay xaqan ilaa 6 bilood ka dib diiwaan gelinta degmadda. Ilaa 1 Maayo 2019 waxaa jira qaban qaabo gaar ah oo dhakhtarka guud ah wixii codsanaya adeegyada turjubaanka telefoonka ee la tashiyada statushouder
Waa muhiim inaad ogaato in turjubaanka:
uu xadaynayo qarsoodi ahaanshaha xirfadeed;
u hadli doono qofka koowaad ("aniga");
uu dhexdhexaad yahay oo turjumo shay kasta oo la yidhi iyaddoon lagu darin, la beddelin ama laga tegin macluumaad;
uu bilaash u yahay bukaanka.
Turjubaan turjumaya waxa xirfad yaqaanka daryeelka caafimaadka iyo macmiilku uu sheegayo
Adeega saacadaha Dhakhtarka guud shaqada ka maqan yahay
Waxaad wici kartaa Adeega saacadaha Dhakhtarka guud shaqada ka maqan yahay (huisartsenpost) ee fiidka ama dhammaadka todobaadka. Waad booqan kartaa haddii aad u baahantahay daryeel degdeg ah. "Degdeg" macanheedu waxa weeye dhibta caafimaadka ma sugu karto ilaa maalinta shaqada xigta ee dhakhtaarkaaga guud. Markaad wacdo, go'aan ayaa la gaadhaa haddii aad u baahantahay inaad booqato adeega saacadaha dhakhtarka guud shaqada ka maqanyahay.
Juridisch Loket (Taageerada sharciga ah)
Haddii aad qabto su'aalo ku saabsan xuquuqagaaha, waxaad la xidhiidhi kartaa miiska caawimada sharciga (juridisch loket) wixii ah la tashiga (telefoonka).
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Helitaanka daryeelka caafimaadka
Goynta Xubinta taranka dhediga